पत्रात्मक कथा | मझेरी डट कम
Biju Subedi — Sat, 06/18/2016 - 00:51
बाबा तपाईं आरामै हुनुहुन्छ ? साह्रै खुसी लाग्यो । मलाई यति साह्रो तकलिफ गरेर हेरचाह गर्न फेरि आउनु भएकोमा । दुनियाँ स्वार्थी छ । तपाईंको मुसुमुसु चेहराको सम्झनाको झोँकाले तपाईं आउनु भो भन्ने थाहा पाएँ, मैले साथ पाएँ । तपाईंको दुनियाँ र मेरो दुनियाँ फरक छ । मैले तपाईंलाई भ्रूणको हत्या नगरौंबाट मेरो पहिलो सन्तानलाई भेटेसरी भेट्ने चाहना राखेको थिएँ तर त्यो बाटोमा जानु अगाडि नै तपाईं आइपुग्नु भो । यत्ति साह्रो आजसम्म पनि मलाई हेरचाह गर्नुहुन्छ । यो मैले सोचेको पनि छैन । तपाईंले सोच्नु होला मलाई कत्ति डर लाग्छ भनेर । तर होइन म कुनै पनि डर मान्दिन । बरु तपाईंको मुस्कान मलाई मनपर्छ । तपाईं अग्रज हुनुहुन्छ । तपाईंको भुसुनाको रुप देखेँ । तपाईंको बत्तीकीराको रुप देखेँ बिपनीमा भने सपनीमा लेटिएको उत्तराङ्ग सशरीर साक्षात दर्शन पाएँ ।
गोपीलाल कँडेल — Tue, 03/31/2015 - 07:26
प्रिय रेसुङ्गा !
आज अचानक तिम्रो याद आयो । मैले तिमीलाई छोडेर हिडेको पनि ३ महिना भैसकेछ । हिजो दिनभरि यताको आकाशमा बादल थियो । सायद तिमी पनि बादलुको घुम्टोले ढाकिएर विवाह मण्डपकी दुलही जस्तै भएकी हौली । म त्यहाँ छँदा तिमी रोइरहन्थ्यौ जस्तो लाग्थ्यो । अलिकति बादल पनि तिमीलाई मन पर्दैनथ्यो । यहाँ तिमी जस्तै काभ्रे छिन् तर तिमीभन्दा धेरै सानी छिन्, तिमी जस्ती जवान पनि छैनन् । तिमी जस्ती रसिली पनि छैनन् । काफल लालीगुराँस ऐसेलुका गहना त छन् काभ्रेसँग तर तिमीले लगाएका जस्ता ताजा उज्याला र रसिला छैनन् । जनतन बाँचेकी छन् यिनी ।
akranta — Thu, 01/08/2015 - 20:45
साउनको उर्लदो भेलसँगै वगिरहेका त्रिसुलिका भेलहरूसँग साएद आज उनको आसुहरू पनि अन्तिम हुन सक्छ यही सोच्दै छिन उनी । त्यसैले अन्तिम यी पलहरूसँगै वर्सिरहेका मेघहरूसँग रुझ्दै उनी सारा आसुहरू वगाउन चाहन्छिन अनि ती आसुहरूसँग सारा चोटहरू । लाग्छ ती मेघका प्रत्येक थोपाहरू आज उनको लागि अन्तिम हुने छन । साच्चै
HomSuvedi — Wed, 05/28/2014 - 20:05
सि‌खडाज्यू मलाइ एउटा लेख युनिकोडबाट प्रीतीमा परिवर्तन गर्नु परेको छ । अनि आवश्यक पनि छ । कृपया उपाय दिनु होला । कसरी यसलाइ त्यसो गरिन्छ लिङ्क दिएर सहयोग गरिदिनुहोला म अााशावादी छु । धन्यवाद । तपाईँको होम सुवेदी ।
sagarmatha — Wed, 02/12/2014 - 16:28
मेरी प्यारी प्रियतमा
अनमोल माया अनि अनगिन्ती सम्झनाहरु
प्यारी तिमी मेरी जिन्दगी हौ । जिन्दगी एउटा यात्रा हो भने तिमी मेरी सहयात्री हौ । जिन्दगी एउटा बगैचा हो भने तिमी त्यसको सुन्दरता हौ । जिन्दगी एउटा कथा हो भने तिमी त्यस कथाकी मुख्य पात्र हौ । जिन्दगी यदी तपस्या हो भने तिमी मेरी बरदान हौ । जसरी सहयात्री विनाको यात्रा कठिन हुन्छ, सुन्दरता विनाको बगैचा कुरुप हुन्छ, पात्र विनाको कथाको महत्व हुदैन अनि वरदान विनाको तपस्या निरर्थक छ त्यसरी नै तिमी विनाको जिन्दगानी निरर्थक, महत्वहिन, कुरुप अनि कठिन छ ।
ks — Sun, 03/31/2013 - 09:05
पराई प्रेयसी आशा……
रेगिस्तानबाट अन्तिम प्रेमोपहार, नयाँ जीवनको शुभकामना सहित ।
आशा र म एकै छिमेकका बसेरा हौ । मैले थाहा पाए अनुसार आशाले मलाई मनपराउथी तर भन्न डराउथी । हामी दुईकै पानी भर्ने पधेरी एकै थियो । एकदिन साँझपख उनको र मेरो पधेरीमा भेट भयो । मैले उसलाई छेड हानेँ, "के हो, आशा यति साँझ पधेरीमा ? चक्रर छ जस्तो छ नि ?"
ks — Mon, 01/14/2013 - 16:40
प्रिय मित्र भुनेश्वर,
वाल्यसखाको न्यानो सम्झना !
म यहाँ सुखी र खुशी छु । त्यहाँ तिमी पनि कुसल मङ्गल छौ भन्ने कुरामा आशावादी छु । यो लक्ष्मणेले किन चिठी लेखेछ भनौला । एउटा विशेष कामले नै चिठी लेख्न बसेको हुँ । त्यो विशेष कामका वारेमा अहिले नै बताइहालेँ भने ममाथि अन्याय हुनेछ, मेरो अन्तस्करणमा खलल पुग्नेछ भन्ने पक्का छ ।
ks — Thu, 01/03/2013 - 07:30
यहाँ म र मसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू ठीकठाक छन् । त्यहाँ तपाईं र तपाईंसँग गाँसिएका कुराहरू पनि ठीकै छन् भन्ठान्छु । चिठ्ठी नलेखीकनै नहुने त्यस्तो कुरा त केही थिएन तर जीवनका उकालीओरालीका अनुभवहरू बाँडचुड गर्नाका निम्ति लेख्न बसेको छु ।
बुक पर फेसबुक वर